Tag: zvemukati mhando | Martech Zone
Tag: zvemukati mhando
Makumi gumi apfuura, kushambadzira zvemukati kwakaratidzika kunge kuri nyore, handizvo here? Chinyorwa chine chifananidzo chakaita zvishamiso uye chaigona kushandiswa mune yakanangana tsamba chidimbu chakatumirwa pane webhusaiti yekambani. Nekukurumidza kumberi uye iri kuve yakaoma nzvimbo yakaoma. Uku kuratidzwa kwenzvimbo yekushambadzira yemukati setafura yePeriodic, zvine hungwaru. Yakagadzirwa naChris Lake, Director weChigadzirwa Kuvandudza paEconsultancy. Dzvanya pane yekutarisa pane yedu